ဇူလိုင် 06, 2020 in သတင်းစဉ်
ဇွန် 19, 2020 in သတင်းစဉ်
ဇွန် 01, 2020 in သတင်းစဉ်
MCRB ၏ ဒါရိုက်တာ ဗစ်ကီဗိုမန်းသည် မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာအသင်း(MEAA) မှ မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တက်ရောက်လာသူ ၆၀ ခန့်ပါ၀င်သည့် ဝက်ဘီနာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် တင်ပြမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဗစ်ကီဗိုမန်းမှ “စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုရေးတာဝန်” (‘CSR’) ကို နားလည်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု အမျိုးမျိုးတို့အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
မတ် 02, 2020 in သတင်းစဉ်
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အပြုဌာန (MCRB) နှင့် Green Future အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းပြီ ‘တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း’ ဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ခုကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၊ ၁၁ ရက်နေ့များတွင် ရေနံချောင်းမြို့၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုသင်တန်းသို့ ရေနံချောင်းမြို့မှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် တရုတ်-မြန်မာ ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားရာဒေသ တစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများမှဒေသခံ ၃၅ ယောက်ခန့်် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ထိုသင်တန်းကို ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေရေနံသာအခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 09, 2020 in သတင်းစဉ်
စက်တင်ဘာ 06, 2019 in သတင်းစဉ်
MCRB, in partnership with Scholar Institute heldatraining on Responsible Business and the role of Environmental Impact Assessments (EIAs) in Kyaukphyu on 29 August.
စက်တင်ဘာ 02, 2019 in သတင်းစဉ်
ဇွန် 10, 2019 in သတင်းစဉ်
MCRB and Vermont Law School are undertakingaprogramme of In-Depth Training on Environmental Legal Advocacy for civil society leaders, to support them in understanding Myanmar’s environmental policy and law framework.
ဇန်နဝါရီ 02, 2019 in သတင်းစဉ်
နိုဝင်ဘာ 06, 2018 in Resources
နိုဝင်ဘာ 05, 2018 in သတင်းစဉ်
အောက်တိုဘာ 15, 2018 in သတင်းစဉ်
MCRB in partnership with Metta Development Foundation and Environmental Conservation and Farmer Development Organization (Shan), heldaworkshop on EIA in Taunggyi on 3-4 October for around 40 partiicpants from civil society organisations (CSOs) and commu
ဇွန် 18, 2018 in သတင်းစဉ်
မေ 21, 2018 in သတင်းစဉ်
မေ 07, 2018 in သတင်းစဉ်
နိုဝင်ဘာ 24, 2017 in သတင်းစဉ်
စက်တင်ဘာ 28, 2017 in သတင်းစဉ်
ဧပြီ 28, 2017 in Resources
အောက်တိုဘာ 13, 2016 in သတင်းစဉ်
စက်တင်ဘာ 30, 2016 in သတင်းစဉ်
ဩဂုတ် 25, 2016 in သတင်းစဉ်
ဇူလိုင် 17, 2016 in သတင်းစဉ်
မေ 19, 2016 in သတင်းစဉ်
ဧပြီ 04, 2016 in Resources
မတ် 22, 2016 in သတင်းစဉ်
ဖေဖော်ဝါရီ 01, 2016 in Resources
ဇန်နဝါရီ 25, 2016 in Resources
မတ် 17, 2015 in သတင်းစဉ်
ဖေဖော်ဝါရီ 25, 2014 in သတင်းစဉ်
ဖေဖော်ဝါရီ 11, 2014 in သတင်းစဉ်